STC-taxane Qalabka Mashiinka Farsamada -Wuxi Daya Technology Co., Ltd.
110 Ton C Frame Double Point Crank Sax Sax
5. Shuruudaha farsamo
(1) Daminta tusaha isdabajoogga sare, adkaanta oo ka sareysa heerka HRC45 ，
Faa'iidooyinka:xirto iska caabin si weyn u hagaagtay. (malaha daaweyn-demin heer sare ah oo soo saarayaasha kale)
(2) Tilmaamaha istiraatiijiga tareenka tareenka wax lagu shiido, xajmiga dusha sare ee u dhexeeya Ra0.4-Ra0.8 ，
Faa'iidooyinka:ilaali saxsanaanta sare, xidho si aad ah hoos u dhac. (ma jiro wax demin iyo wax shiida oo ay soo saaraan shirkadaha kale)
(3) Diyaarad tareen oo xawli ah 0.01mm / M, saxnaan sare.
(4) Dhammaan qeybaha wareegga gaaska waa Japan SMC.
(5) Waxaan u adeegsanaa waalka gawaarida elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'MAC MAC American', dareenka jawaabta jet waa mid sareeya.
(6) Maaddada crankshaft waa 42CrMo (Wax la mid ah AIDA).
Faa'iidooyinka:30% ayaa ka xoog badan 45 bir, cimri dheer adeeg. (guud ahaan 45 bir oo ka socota soo saarayaasha kale)
(7) Gacanta naxaasku waa zqsn10-1 (tin-fosfooras naxaas ah), taas oo la mid ah AIDA naxaas gacmeed.
Soosaarayaasha kale waxay isticmaalaan BC6 (kolley naxaas waxaa sidoo kale loo yaqaanaa 663 copper), taas oo 50% ka xoog badan naxaasta caadiga ah (cadaadiska dusha sare) kana sii cimri dheer. Saxnimada dheer iyo cimriga adeegga dheer.
(8) Dhammaanteen tuubooyinku waa Φ 6, qulqulka saliidda, ma ahan macaanka fudud. (warshadaha kale badanaa waxay isticmaalaan Φ 4).
(9) Tabeelku wuxuu ka samaysan yahay nooca Japan-ka ee loo yaqaan 'TM-3 alloy copper alloy' (oo la mid ah AIDA)
Faa'iidada: fursadda qaniinyada dhimashadu aad bay u yaraysaa (soo saaraha guud waa bir bir ah).
Screen Shaashada taabashada waxay soo bandhigeysaa xarfaha Shiinaha (ama udhaxeeya Shiinaha iyo Ingriiska), taas oo ah mid fudud oo si fudud loo fahmi karo, waxayna soo bandhigeysaa xaddidaadyo kala duwan oo saxaafadda ah, sida tirada istaroogyada, elektaroonigga CAM elektarooniga ah, iwm. waxaa lagu dejin karaa shaashadda taabashada;
Display Bandhigga macluumaadka hawlgalka iyo fashilka, si hawl wadeennada iyo dayactirayaasha ay si dhakhso leh u xalliyaan dhibaatooyinka saxaafadda, u yareeyaan xilliyada shaqada;